နှုတ်နဲ့ Non-နှုတ် Self-တင်ဆက်မှု
ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာအတွက် Samoprozentatsiya နေ့စဉ်ရှိနေခြင်း။ များသောလူများတိုင်းလူတစ်ဦးကိုမှန်မှန်ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်။ သငျသညျအဝတျအစားမြား၏စတိုင်ကို select သောအခါဤအခါသမယသို့မဟုတ်မူအကငျြ့ပေါ် မူတည်. ဖြစ်ပေါ် - အခြေအနေအပေါ်။ ဤနည်းဗျူဟာဟုချေါသညျ - "သဘာဝက Self-တင်ဆက်မှု" ။
self-တင်ဆက်မှု - ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးလူမှုကမ်ဘာပျေါတှငျမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပုံရိပ်သည်နှင့်သူ့ကိုပတ်လည်ရှိလူတွေအတွက်လူတစ်ဦးအကြောင်းကိုတစ်ဦးအခြို့သောအထင်အမြင်ကိုဖန်တီးရန်ရည်ရွယ်ထားသောလုပ်ငန်းစဉ်ကို။ self-နို့တိုက်ကျွေးရေးလူရဲ့စိတ်ကိုတစ်ဦးပုံရိပ်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းများအတွက်လူသားထုအသုံးပြုသောဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှု၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာတစ်ဦး Self-လူမှုရေးနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိရန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလမ်းပေါ်မှာသူစိမ်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်နှင့်ရုံးခန်းများနှင့်အစိုးရအေဂျင်စီများအတွက်အဆင့်မြင့်မိတ်ဖက်တွေနဲ့အဆုံးသတ်ကနေအထိအခြေအနေများအမျိုးမျိုးအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
လူမှုဝယ်လိုအားဆွဲဆောင်မှု၏အိမ်ဖွဲ့ကိုအောင်မြင်နိုင်ပါသည်။ Self-လေးစားမှုကိုတိုးပှား တစ်ဦးချင်းစီမူလအစနဲ့ဆွဲဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, မည်သည့်ဘာသာရပ်အပေါ်တစ်ဦးစကားပြောဆိုမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စွမ်းရည်ကထောက်ပံ့ထားတဲ့, သာယာသောအဖော်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ လက်ျာ image ကိုဖန်တီးရှာတွေ့မှစွမ်းရည်လူတစ်ဦးမှအာရုံစိုက်နှင့်ဆက်ဆံရေးတည်ထောင်ရန်ကူညီပေးသည်။
self-ဝိသေသလက္ခဏာလူတိုင်းအတွက်လိုအပ်ပေသည်။ ဤအများအပြားအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်, အဓိကသူတွေကိုနေသောခေါင်းစဉ်:
ပတျဝနျးကငျြအခြို့သောအရင်းမြစ်များထံမှရယူခြင်း။ သူတို့ဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်, စိတျပိုငျးဆိုငျရာဖွစျနိုငျပါတယျ။ မိမိတို့ကိုယ်ကိုလျှောက်ထားရန်နိုင်စွမ်းမဆိုလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ဘုံဘာသာစကားရှာတွေ့ခြင်းငှါ, ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်ဖို့အလုပ်မှာလစ်လပ်နေရာတစ်နေရာယူကပိုမိုမြန်ဆန်လွယ်ကူကူညီပေးသည်။
ကို "ငါ" ၏တည်ဆောက်ခြင်း။ သင်ကိုယ်တိုင်တင်ပြပုံကိုပေါ် မူတည်. ကျနော်တို့ပတျဝနျးကငျြကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဖော်ရွေရယ်မောနှငျ့သငျလိမ္မာနှင့်ရွှင်လန်းသောလူတစ်ဦး jokes, သင်အရည်အချင်းနှင့်တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာအကြောင်းပြောဆိုလျှင်သင့်ရဲ့ရာထူးမှတုန့်ပြန်ပြုံး - အလွန်လျင်မြန်စွာသင်ဤအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာဖွေခံစားမိပါလိမ့်မယ်။
လူမှုရေးအဆက်အသွယ်ကျော်ချောမွေ့။ အခြားလူများရဲ့အမှားကိုအကြောင်းကိုအကင်းပါးသောမှတ်ချက်တွေသင့်ရဲ့လိပ်စာမှမှတ်ချက်များ၏နံပါတ်လျှော့ချပါလိမ့်မယ်။ ဒီအမူအကျင့်ကိုသိသိသာသာထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုများနှင့်ကျူးကျော်များ၏အဆင့်ကိုလျှော့ချမည်, နှင့်ဆက်သွယ်သည့်အခါဝေဖန်မှုများချောမွေ့ရန်။
နှုတ်နဲ့ Non-နှုတ် Self-တင်ဆက်မှု - Self-အစေခံနှစ်ခုအခြေခံအမျိုးအစားများဖြစ်ကြသည်။ သူတို့က (သင်တစ်ပန်းခြံဒါမှမဟုတ်မြို့ရဲ့လမ်းမ၌လမ်းလျှောက်, ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်သင့်စွမ်းရည်, ဒါမှမဟုတ်သူငယ်ချင်းအုပ်စုတစ်ခုစဉ်အတွင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်လယ်ပြင်၌လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သို့မဟုတ်ဘေးမှရပ်ကြည့်နေသူတွေတွေ့မြင်နိုင်သည်ကဲ့သို့), ပတ်ပတ်လည်မြေတပြင်လုံးသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူတစ်ဦးကိုပြသခြင်းနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းပေးတော်မူ၏။
နှုတ်ဖြင့် Self-တင်ဆက်မှုသင်တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏အခြို့သောပုံရိပ်ကိုဖန်တီးရန်ဟောပြောချက်နှင့်ဘာသာစကား tools များ၏ features တွေသုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ထို့အပွငျ Self-အစေခံ၏ဤမျိုးရေးသားဘာသာစကားသက်ဆိုင်သည်။ ဆက်သွယ်ရေး၏ Non-နှုတ်နည်းလမ်းများများအတွက်သတင်းအချက်အလက်များဖလှယ်ခြင်းနှင့်စကားများမသုံးဘဲဆက်သွယ်ပြောဆိုရည်ညွှန်းတယ်။ ဤရွေ့ကားမျက်နှာအသုံးအနှုန်းတွေ, အမူအရာ, နိမိတ် signal ကိုစနစ်များပါဝင်သည်။ ဆက်သွယ်ရေး၏ထိုကဲ့သို့သောနည်းလမ်းများမူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းသို့မဟုတ်သဘာဝအများနှင့်အတုဘာသာစကားများအမည်ရှိခဲ့ကြသည်။
အခါ Self-တင်ဆက်မှုကိုသင်နည်းလမ်းနှစ်ခုထဲကတစ်ခုကိုသုံးနိုင်သည်: လူအခြို့သောစက်ဝိုင်းမှညှိနှင့်၎င်းတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာရန်။ ပထမဦးဆုံးအမှု၌သင်တို့ကိုသည်းခံခြင်းနှင့်ဂရုတစိုက်ဤအုပျစုစောငျ့ရှောကျဖို့အချိန်အနည်းငယ်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးစတိုင်, ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာများ, အမူအရာနှင့်အလေ့အထများအာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်ပေသည်။ ဒါဟာသင်လျင်မြန်စွာခွင့်ပြု မယ့်ဘုံဘာသာစကားရှာတွေ့ ထားတဲ့အပြင်နဲ့တူခံစားရမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်နှင့်မဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သော Self-နို့တိုက်ကျွေးစဉ်အမြဲသင့်လျော်သောမဟုတ်ဘူး။
သူတို့ရဲ့အလေးပေး ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ။
စတင်ရန်ဘယ်မှာ - self-တင်ဆက်မှု?
အင်တာဗျူးဖို့ self-တင်ဆက်မှုဂရုတစိုက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရမည်ဖြစ်သည်တစ်ဦးချင်းစီအရာငါးခုအဓိကအဆင့်ဆင့်၏ပါဝင်ပါသည်။ ဒါဟာပါဝင်ပါသည်:
အဆိုပါလစ်လပ်ထိုင်ခုံများအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၏ပထမအဆင့်တွင်စဉ်အတွင်းတင်ပြသင့်နာမည်အပြည့်အစုံခေါ်ဆိုနှင့်ခရီးစဉ်၏ရည်ရွယ်ချက်ကြေညာရန်လိုအပ်သည်။ သူတို့တစ်ဦးစီမိန့်ခွန်းများအသံမြည်ခြင်း, ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်နှင့်နှုန်းမှာတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောသေံရှိပါတယ်ကတည်းကဒီအဆင့်မှာနှစ်ဖက်စလုံးတစ်ဦးပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့် ယူ. အချင်းချင်းအသုံးရသင့်ပါတယ်။ self-တင်ဆက်မှုကိုယ်တိုင်ကစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူတုန်လှုပ်ခြင်းမရှိဘဲ, အေးဆေးတည်ငြိမ်ပင်သေံကောက်ယူရပါမည်။ သင်ကုမ္ပဏီအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်မရနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပါကပြည်နယ်မှကရကျိုးနပ်သည်, သို့သော်, အဲဒါကိုယုံကြည်စိတ်ချရသောကြောင်းသေချာအောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ကို Creative Self-တင်ဆက်မှုကိုမကြာခဏလူတစ်ဦးပေမယ့်လူမျိုး၏အုပ်စုတစုအဘို့မဟုတ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သငျသညျလူထုအဖွင့်မိန့်ခွန်းကိုဆွဲဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုရရန် self-နို့တိုက်ကျွေး။ အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားကျွမ်းကျင်သူတွေကတင်ဆက်မှုအပြီးကိုယ့်ကိုကိုယ်အသုံးဝင်သောအကြောင်းအရာအလိုက်ပဟေဠိမေးရန်နှင့်အပြန်အလှန်ကျောင်းသားတွေကိုချိတ်ဆက်ယုံကြည်ကြသည်။ ထိုသို့သောတစ်ခုချဉ်းကပ်နိုင်သမျှတင်းမာမှုကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ယုံကြည်မှု၏အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မယ်။ ပြီးနောက် - ဖျော်ဖြေပွဲ၏ပျေါလှငျဖော်ထုတ်ရန်နှင့်၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံမှာပါစေ။ တင်းကြပ်စွာအရေးပါသောအချက်လက်လွတ်မဖို့စီစဉ်ထားအစီအစဉ်ကိုလိုက်နာ။
Self-တင်ဆက်မှု၏အနုပညာအသီးအသီးဇာတ်စင်၏အရည်အချင်းထောက်ပံ့ရေးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမိန့်ခွန်း၏ဇာတ်သိမ်းမနည်းအရေးကြီးသောအစအဦးများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်၏အခြေခံအနှစ်သာရ၏တင်ဆက်မှုသည်ထက်သည်။ ထိရောက်သော Self-တင်ဆက်မှုရရှိရန်, သင်မူရင်းကြောင့်အပြီးသတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ : ဒီလိုလုပ်ဖို့
self-တင်ဆက်မှု - စာအုပ်
တိုင်းလူတစ်ဦး၏အသကျရညျအသှေးတိုးတကျဖို့လိုလားပေမယ့်တော်တော်များများလမ်းညွန်အတွက်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲနှင့်အစိုင်အခဲဘဏ္ဍာရေးထောက်ပံ့မှုကိုရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်များအဆိုအရကြောင့် "အားလျော့" နိုငျကြောင့်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိခြင်း, ဒါပေမယ့်လည်း Self-မြှင့်တင်ရေးတို့အတွက်သာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုခက်ခဲတဲ့တာဝန်များတွင်မူရင်း samoprozentatsiya ကူညီပေးပါမည်။ အရေးယူဘို့မိမိတို့အကငျြ့မြားနှငျ့လှုံ့ဆျောမှုအမျိုးမျိုးဥပမာကိုကြည့်ပါကဤစာအုပ်အတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှသည်:
"Self-တင်ဆက်မှု၏လေ့ကျင့်ရေး" E.Mihailova ။ နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ကိုယ်နှိုက်များအတွက်ပြော၏။ ရေးသားသူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပြန်အလှန်နှင့်အပြုအမူ၏အဓိကအချက်များကိုဖော်ပြထားသည်။
"ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်တပ်" Kotler, ဂျေ, အမ် Stoller ရိန်။ အဆိုပါစာအုပ်လူကြိုက်များရရှိဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန်ကူညီပေးသည်။ အဆိုပါစာရေးဆရာတွေဖြစ်တဲ့ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်း, Donald Trump, Christina Aguilera အဖြစ်နာမည်ကြီးတွေရဲ့အောင်မြင်မှုပုံပြင်များကိုးကား။
အယ်လ် Frankel "ကောငျးမိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစေပါဘူး" ။ အဆိုပါစာအုပ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလှေကားတက်ရွှေ့ဖို့ကြိုးစားနေသည့်အခါအမှားတွေကိုရှောင်ရှားဖို့ဘယ်လိုသင်ပေးတယ်။
ပိရမစ်အစီအစဉ် - တစ် Ponzi scheme ကိုလက္ခဏာနှင့်မည်သို့အလုပ်လုပ်တယ်?
အသစ်ကအဖွဲ့က join ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - ကြောင်းတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဆွဲဆောင်ဖို့ဘယ်လို, သူတို့ရဲ့အမျိုးအစားများ, ပန်းတိုင်ဖြစ်သနည်း
မိန်းမတို့အဘို့အင်္ကျီတွေထိုးပြီး - အရှိဆုံးဖက်ရှင်နဲ့စတိုင်
သင့်ရဲ့အံသွားကလေးတွေတိုက်လုပ်နည်း - အထောကျအကူအကွံဉာဏျသွားဆရာဝန်
ဆလရီ - အကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့ပျက်ဆီး
နေကြာဆီနှင့် marinated ခရမ်းချဉ်သီး
လျှော့ချချို့ယွင်းသော - ရောဂါလက္ခဏာများ
အနီရောင်ကော်ဇောပေါ် Over-ထှနျးမတ်မတ် Kate Winslet သည် vs.
Olga Nikishicheva - နွေရာသီဝတ်စုံ
Duphaston ပြီးနောက် Scanty menses
ကြက်သား puff pastry နှင့်အတူ Samsa
ပဲရစ်ဖက်ရှင်ရက်သတ္တပတ်: အ Chanel ရှိုးမှာ Kaia Gerber, မာရီယန် Cotillard နှင့်အခြားကြယ်များ
Sexy, ဒါပေမယ့် unsportsmanlike ကိတ် Upton မတ်ေတာသမဂ္ဂဇင်းများအတွက်မှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံများရိုက်ကူး